Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Ogige Ntụrụndụ Uganda na -eleta ndị njem dị mfe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Ọhụrụ ụzọ ịkwụ ụgwọ iji banye Ogige Ntụrụndụ Uganda
Ndị na -ahụ maka anụ ọhịa Uganda (UWA) ewepụtala usoro ịntanetị maka ịkwụ ụgwọ niile ịbanye na ogige ogige mba Uganda iji nweta ọrụ, ngwaahịa na ihe omume.
Nke a ga -abụrịrị nchekwa maka ndị njem na -abanye n'ogige ntụrụndụ mba na mpaghara echekwara mgbe ha na ezumike na Uganda.
Ekpughere usoro ịkwụ ụgwọ ọhụrụ na ntinye mbugharị mebere na August 9, 2021, nke njikwa UWA haziri.
Enwere ike ịhazi ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị site na iji VISA, Master Card, na kaadị kredit American Express maka ego dollar US na Uganda Shilling.
Nzukọ mbugharị ahụ gụnyere Stephen Masaba, Director nke njem nlegharị anya na mmepe azụmahịa; Jimmy Mugisa, onye isi ego; Paul Ninsiima, Onye njikwa ahịa; na ndị ọrụ oche Robert Maani na Leslie Muhindo.
Emepụtara na mmekorita ya na ABSA, Stanbic, Centenary (UGX naanị) na Citi Banks, enwere ike ịhazi ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị site na iji VISA, Master Card, na kaadị kredit American Express maka dollar US (USD) na Uganda Shilling (UGX).
Mgbe nbanye, a na-eziga paswọọdụ otu oge na nọmba ekwentị nke onye ahịa ya na azụmaahịa ọ bụla nke na-esi na Portal arụpụta nnata nwere nọmba ndebanye aha pụrụ iche (URN) wee zigara onye ahịa ya na-akọwa ọrụ na ogige nhọrọ maka ngosi. n'ọnụ ụzọ dị iche iche.
Nhọrọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ dị gụnyere:
• Ịkwụ ụgwọ ozugbo n'ụlọ akụ ruo mgbe a ga -ewepụta mpempe akwụkwọ ụlọ akụ n'ọnụ ụzọ ogige maka nnata.
• Ịkwụ ụgwọ site na Point of Sale (POS) nke Stanbic na Absa Banks na -akwado gbakwunyere pasent 0.75% n'ọnụ ụzọ ámá ahọpụtara nwere ohere ịntanetị na ike.
• Ịkwụ ụgwọ site na ikpo okwu ekwentị mkpanaaka maka ọrụ akọwapụtara site na USSD (Data Service Supplementary Service Data) nke na-enye ohere ka ekwentị mkpanaaka kparịta ụka ozugbo na kọmpụta ndị na-ahụ maka ọrụ site na ozi ederede na menu ndapụta. A na -atụ anya na nhọrọ a ga -amalite na njedebe nke Ọgọst 2021.